Ị nwere ike ịnye sample maka nnwale?
1-3 iberibe samples dị na nnyefe oge na-emekarị 3-5 ụbọchị (N'ozuzu). Ihe nlere anya ahaziri ahazi nke dabere na ngwaahịa anyị ga-ewe ihe dịka 5-10days. Oge nyocha nke ihe atụ pụrụ iche na mgbagwoju anya na-adabere n'ọnọdụ dị adị.
Banyere ụgwọ nlele:
(1) Ọ bụrụ na ị chọrọ samples maka àgwà nlele, sample ụgwọ na mbupu ụgwọ ga-ana site asịwo si.
(2) Free sample dị mgbe iwu kwadoro.
(3) Ọtụtụ n'ime ihe nlele ụgwọ nwere ike laghachi gị mgbe iwu kwadoro.
Ogologo oge ole ka oge mmepụta gị dị?
Nọmalị ọ ga-ewe banyere 15-20days.
T / T, 30% T / T ugwo n'ihu, 70% itule akwụ tupu Mbupu ma ọ bụ megide oyiri nke BL.
L/C na anya na-anabatakwa.
Ị nwere ike iji ụdịdị ahaziri ahazi nke m chọrọ iji mepụta ebu ọhụrụ?
EE, Anyị nwere ike ịme nha na nkọwapụta ahaziri iche.
Gịnị bụ nkịtị ụzọ oge?
Maka ngwaahịa nkịtị, anyị ga-ezitere gị ngwongwo n'ime ụbọchị ọrụ 7-15 mgbe anyị natara ụgwọ gị. Maka ngwaahịa pụrụ iche, 20-35 ụbọchị mgbe nnata nke 30% T / T nkwụnye ego ma ọ bụ L / C na anya.
Kedu otu esi ejikwa ogo gị?
Anyị nwere akụkụ 3 nke QC nke anyị iji nyochaa usoro ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Enwere m ike ịga leta ụlọ ọrụ mmepụta ihe gị?
Anyị na-anabata nke ọma ileta anyị. Agbanyeghị, n'oge ọrịa na-efe efe, ịkwesịrị ịme nchọpụta Nucleic acid na ikewapụ mgbe ị bịara China nke ga-ewe gị ogologo oge. Ya mere, anyị na-akwado ndị ahịa anyị na ndị enyi anyị hụrụ n'anya ka ha bịa leta anyị mgbe ọrịa ahụ gasịrị, anyị ga-anabatakwa nke ọma.
Kedu ka anyị ga-esi họrọ ụzọ mbupu?
Maka obere usoro, anyị ga-atụ aro ka ị họrọ awara awara, dị ka DHL,FEDEX,UPS,TNT,etc.N'ihi na ibu iji, anyị ga-atụ aro na ị na-ahọrọ site oké osimiri. Ọ bụrụ na ị na-ngwa ngwa, ị nwere ike họrọ site ikuku. Anyị ga-enyere gị aka ịhọrọ ụzọ mbupu kacha mma dị ka nkọwa nkọwa gị si dị.
Nweta ike ahaziri ahazi, Na-eweta ọkụ ọkụ Led Strip, mgba ọkụ mode ike ọkọnọ, Nnyenye ike na-agbanwe agbanwe, Nkwanye ike Dc, Nnweta ike mmemme,